Umatshini wocingo wekhonkco otyhidiweyo ubizwa ngokuba ngumatshini wedayimane, umatshini wenkxaso yamalahle wamashishini, umnatha womnatha. Umatshini wocingo lwekhonkco ngumatshini wocingo osika ucingo lwekhabhoni yentsimbi ephantsi, ucingo olungenasici, intsimbi yealuminium, ucingo lwePVC kunye nocingo lokutshiza ucingo kwintambo yekhonkco. Iigridi ziyafana, umphezulu ugudile, kwaye imbonakalo intle. , Ububanzi bocingo obunokuhlengahlengiswa, ubukhulu becala locingo, akukho lula ukonakala, ubomi obude, ...
I-Hydraulic Baler Lo matshini ikakhulu ubunjwe ngesakhelo, ipleyiti yoxinzelelo, isilinda yeoyile, iyunithi yempompo yeoyile, itanki yeoyile, ibhokisi yombane njalo njalo. Xa umatshini usebenza, uxinzelelo lweoyile olunikezelwa yiyunithi yempompo yeoyile lukhawulelwe yivelufa yokhuseleko kwaye ingena kwivelufa yesikhokelo. Xa ivalve yesikhokelo esetyenziswayo isebenza kwindawo yasekhohlo, uxinzelelo lweoyile lungena kwigumbi eliphezulu lesilinda, kwaye ipleyiti yoxinzelelo iyehla iye ezantsi ngepiston kunye nepiston rod. Th ...
Gabion enemingxuma Machine Stone cage umatshini umnatha ikwabizwa ngokuba umatshini omkhulu hexagon net. Lo matshini gabion umnatha unesakhiwo tyaba kwaye isetyenziselwa ukuvelisa enemingxuma ezinkulu ezinamacala kunye nobubanzi enemingxuma ezahlukeneyo kunye nobukhulu ezahlukeneyo umnatha. Izinto eziluhlaza zinokufakwa kwentsimbi kwalenza okanye i-polyvinyl chloride yocingo yentsimbi, ucingo lwe-GALFAN yentsimbi njalo njalo. Umatshini we-gabion mesh unokubonelela ngemveliso ye-gabion mesh yeeprojekthi ezahlukeneyo zokwakha. Iimveliso zeGabion zihlala zisetyenziselwa ukukhusela nokuxhasa iindlela, ...
Umatshini ojikelezayo weGabion Umatshini ojikelezayo wasentwasahlobo sisixhobo esixhasayo kumatshini wenethi yamatye. Esi sixhobo sineentonga zentwasahlobo ezijikelezayo, ezijikeleza ngaxeshanye emva kokuqalisa, Intwasahlobo yenzekile ngokuzenzekelayo, kwaye inokujikeleziswa kwaye yenzakalise amanqwanqwa aliqela ukwandisa ubude bomsinga oyinkampani, ukunciphisa inani lotshintsho lwentwasahlobo xa ujika ucingo, kunye nokuphucula ukusebenza ucingo ukujija. Lo matshini spring jiko kufuneka kuphela ukutshintsha c ...
Oluzenzekelayo ezinamacala wocingo Machine ezinamacala ucingo umnatha yi wocingo ezenziwe idiagonal cut wocingo (ezinamacala) ephothiweyo iingcingo zesinyithi. Ubukhulu becala locingo olusetyenzisiweyo luyehluka ngokobungakanani becingo ezinamacala amathandathu. Iigridi ezincinci ezinamacala amancinci kunye neesinyithi zentsimbi zihlala zisebenzisa iingcingo zentsimbi enobubanzi be-0.4-2.0 mm, ngelixa iigridi ezinomaleko wePVC zihlala zisebenzisa iingcingo zetsimbi zePVC ezinobubanzi obungu-0.8-2.0 mm. Olu hlobo lomnatha onamacala asetyenziswa ngokubanzi kumnatha wodwa wefama ...
Ezinamacala wocingo Machine ezinamacala wocingo yi wocingo ezenziwe beveled wocingo (ezinamacala) ephothiweyo iingcingo zesinyithi. Ubukhulu becala locingo olusetyenzisiweyo luyehluka ngokobungakanani becingo ezinamacala amathandathu. Iigridi ezincinci ezinamacala amancinci kunye neesinyithi zentsimbi zihlala zisebenzisa iingcingo zentsimbi enobubanzi be-0.4-2.0 mm, kwaye ezo zinomaleko wePVC zihlala zisebenzisa iingcingo zetsimbi zePVC ezinobubanzi obungu-0.8-2.0 mm. Olu hlobo lomnatha onamacala asetyenziswa ngokubanzi kumnatha wodwa wefama, fenc ...
Umatshini oveliswa ngumzi-mveliso wethu usetyenziselwa ngokukodwa ukuvelisa iikhoyili ezincinci. Iqhutywa yimoto, kwaye kukho ibhokisi yolawulo ukufaka ixesha elinikiweyo. Emva kokucinezela iqhosha lokutshintsha, liya kuyeka ngokuzenzekelayo xa ubude obuchaziweyo bufikelelwe. Ingxolo esebenzayo yalo matshini iphantsi kakhulu. Iimodeli ezahlukeneyo zolu ngcelele loomatshini zinokwenziwa ngokweemfuno. Umatshini uneempawu zoyilo olufanelekileyo, ulwakhiwo olulula, ukusebenza okuzinzileyo, ukusebenza kakuhle, ukusebenza ngokukuko kunye nokugcinwa okufanelekileyo.